The Voice အယ်ဒီတာကို ပုဒ်မတိုးပါက ဥပဒေအကြံပေး ကန့်ကွက်မည်
သရော်စာတစ်ပုဒ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ဖြင့် အမှုဖွင့်၊ အထိန်းသိမ်းခံထားရသည့် The Voice သတင်းစာ အယ်ဒီတာချုပ်ကို အခြားပုဒ်မတစ်ခုဖြင့် ထပ်မံ တရားစွဲမည်ဆိုပါက လက်မခံနိုင်ကြောင်း သူ၏ ဥပဒေအကြံပေးဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်မြင့်က တနင်္လာနေ့တွင် ပြောလိုက်သည်။
မောင်တောတွင် တိုင်းရင်းသားကျေးရွာ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ထူထောင်ထား
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနှင့် နယ်နမိတ်ခြင်းထိစပ်နေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောခရိုင်အတွင်း တိုင်းရင်းသား ကျေးရွာအရေအတွက်မှာ ကျေးရွာ စုစုပေါင်း၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးသာရှိကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် နယ်စပ် ရေးရာဝန်ကြီးဌာနတို့၏ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်များအရသိရသည်။
အောင်လအန်ဆိုင်း နှင့် ဗစ်တာလီ ဘစ်ဒက်ရှ်တို့၏ ပြိုင်ပွဲကို သုဝဏ္ဏမိုးလုံလေလုံ အားကစားကွင်းတွင် ONE: LIGHT OF A NATION ၏ အဓိကတွဲဆိုင်းအဖြစ် ထိုးသတ်မည်ဖြစ်သည်
ကနေဒါနှင့် ဆွီဒင်သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရားဝင်ခရီးထွက်ခွာ
ကနေဒါနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်၊ ဆွီဒင်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဆွီဒင်ဝန်ကြီးချုပ်တို့၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကနေဒါနှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံများသို့ တရားဝင်ခရီးသွားရောက်ရန် မေ ၄ ရက်နေ့က ထွက်ခွာသွားသည်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဥပဒေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းက ရန်ကုန်တွင် ရုံးခွဲဖွင့်လှစ်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်သည့် Dentons ကုမ္ပဏီက အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင် ဈေးကွက် ပိုမိုချဲ့ထွင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ကာ ရန်ကုန်ြမို့တွင် ရုံးခွဲသစ် ဖွင့်လှစ်လိုက်ကြောင်း မေ ၃၁ ရက်နေ့က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် ရှေ့နေများ ပါဝင်သည့် Livingstons Legal အဖွဲ့ကို Mark Livingston က ဦးဆောင်ပြီး Dentons မြန်မာလီမိတက်တွင် Resident.
လောင်စာဆီ လက်လီဈေးကွက်သို့ Puma ဝင်ရောက်လာတော့မည်
ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် လောင်စာဆီတင်သွင်း၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်ရသည့် ပထဆုံးသော ပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအဖြစ် Puma Energy ကုမ္ပဏီအား ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ရာ လောင်စာဆီ လက်လီဈေးကွက်တွင် ကြီးမားသည့်ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ယခုကဲ့သို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ပြုရန် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဓါတ်ဆီနှင့် ဒီဇယ်ဆီများကို ပြည်တွင်းရှိ Puma အမှတ်တံဆိပ်ပါဆိုင်များတွင် ရောင်းချနိုင်မည်ဖြစ်သည့်အပြင်.
ဖမ်းဝရမ်းမပြနိုင်ပါက ပြန်လွှတ်ရန် ဦးကျော်မင်းဆွေနှင့် ဗြိတိသျှကိုကိုမောင်၏ ရှေ့နေက ရဲတပ်ဖွဲ့ကို သတိပေး
ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၆(ဃ)ဖြင့် ဗဟန်းရဲစခန်းတွင် ထိန်းသိမ်းခံလိုက်ထားရသည့် The Voice ၏ အယ်ဒီတာချုပ်နှင့် ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်တို့ကို ၂၄ နာရီထက် ကျော်လွန်ချုပ်နှောင်လိုပါက တရားဝင် ဖမ်းဆီးခွင့် ဝရမ်းပြသရလိမ့်မည်ဟု ၎င်းတို့၏ ဥပဒေအကြံပေး ဦးခင်မောင်မြင့်က ရဲတပ်ဖွဲ့ကို သတိပေးလိုက်သည်။